သဘောင်္တင်ခ drop | စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS
စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် WebSite.WS
ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ Web Sites များ
စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > သဘောင်္တင်ခ drop
100X သြဇာသို့မဟုတ်အနားသတ်မှာ Bitcoin ကုန်သွယ်မှုလုပ်နည်း
သင်က BITMEX နှင့်အတူကောင်းမွန်သောငွေရှာနိုင်သလား?
100သြဇာ×!! Cryptocurrency FX အကောင့်သတ်မှတ်မည် Up ကို
It seems that most successful businesses these days have web sites, even businesses that service only certain geographic areas. web ပေါ်မှာ, where the market place is global, localized businesses can be atagreat disadvantage.
Posted by ကို: စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
Have you always dreamed of having your own home business but didn't feel you would have the time or money to invest? Here are some great home remedies to help you save time while earningalucrative Internet income from home...
You hadagreat idea when you decided to openahome-based Internet retail business. You becamea'power seller,' as people in the online retail business world call you. Your goal is to move tons of merchandise through Web auction sites and classifieds services without ever leaving the comfort of your home office. Drop shipping gives you the opportunity to accomplish your dreams and more. The sky is the limit if you know how to get your business off the ground.
အင်တာနက်ကို Entrepreneurship: ပထမခြေလှမ်း, စတင်ခဲ့သည်
ငါသည်ငါ့အားလပ်ချိန်မှာအချိန်အတွက်နှစ်ဦးအင်တာနက်လက်လီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ခဲ့ကြပြီးဤအခန်းဆက်ဆောင်းပါးများ, ငါ့အတွေ့အကြုံနှင့်လေ့လာသိရှိသင်ခန်းစာတွေအပေါ်လွန်. ငါအင်တာနက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်စဉ်းစားခဲ့တဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိရမည်ခဲ့ကြကြောင်းအနည်းငယ်အမှုအရာရှိကြ၏.
အိမ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်မေးလ် forwarding ကိုဖြေရှင်းချက်
When operating your business from your home should you use your home address for your business correspondence of find and alternative? This isaquestion that most small home businesses need to make before setting out. There are pros and cons to the various solutions that need to be considered.
အရေးပါသောအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် #7: သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းစတိုးသည်စတော့ရှယ်ယာ Inventory ဒါမှမဟုတ် Dropship ကုန်ပစ္စည်း
Planning on an Internet storefront? Every small business owner needs to take these things into consideration when laying the foundation ofa"click and order" operation.
Drop Shipping ၏တနျဖိုး: The Calculation
drop သဘောင်္တင် Profits တွေတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း
You would like to increase your income by selling other peoples` products but you just don`t have the money to stock inventory. သို့သော်ငြားလည်း, perhaps you have lots of your own product and would like to increase your sales, but you don`t havealot of money for advertising. The solution to both problems may lie in drop shipping. 1. Sell Products You Don`t Own You would like to sellavariety of products but you don`t have very much money. Don`t worry! Your cus...
Learn the importance of discovering your own unique selling proposition, or what makes your business unique.
စီးပွားရေးအောင်မြင်ရန်အတွက်သင့် Way ကိုရန်ပုံငွေ bootstrap
Do you need to start or grow your business but have little money? Before you look to banks and similar sources of financing, why not bootstrap your way to business success? A bootstrap isasmall loop of leather or other material that is found on the top rear or sides ofaboot. The purpose of the bootstrap is to help you pull your boot on. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ, bootstrapping has come to mean helping oneself without seeking outside help. It means using your own resources to fin...
မူလစာမျက်နှာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူသင့်အနာဂတ်များအတွက် Plan ကို
Discover how you can use home business opportunities to reach your financial goals. Your future plans can becomeareality today...
Make Money Online in your Pajamas
Yup throw away the old suit and get comfortable while earning in your pajamas, if you want. The main thing is, you don't need to leave the comforts and pleasure of your own home to make money.
အိမ်မှာအလုပ်လုပ်လူတိုင်း Wand ရဲ့. ငါမှအိမ်မှာနေဖို့ချင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ခြောက်လလေးတွေနှစ်ယောက်ခွေးနှင့်အတူကမေ့လျော့. တစ်နေ့တော့ကျွန်မအနည်းငယ်အပိုနှစ်ကောင်အွန်လိုင်းအလုပ်လုပ်ရပုံကိုကြည့်ရှုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. ငါဒါငါကတစ်ဦးပါပေးဖို့ဆုံးဖြတ်မတိုင်မီထိုသို့ပြုကြသည်နှင့်ကလုပ်နေတာကလူအများကြီးကိုတှေ့မွငျတစ်ခါမျှ.
တစ်ဦးကနေအိမ်စီးပွားရေး မှစ. ကြံ့ကြံ့ခံဝင်ငွေ Making
တည်မြဲင်ငွေ, တစ်မ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရ၌သင်တို့လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ပါပြီတစ်ချိန်ကသင်သည်ပိုက်ဆံစုဆောင်းနိုင်သောဆိုလိုတယ်, ဖြစ်နိုင်သည်ကိုအစဉ်အမြဲ. ဘဏ်တစ်ရက်သို့မဟုတ်ညဉ့်အခါပိုက်ဆံထည့်လေ့မရှိကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိခြင်းသည်တစ်အိမ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည့်စုံမည်နိုငျသောလုပ်ငန်းရှင်အိပ်မက်ဖြစ်ပါသည်.
Drop shipping can beavery effective and simple way to get involved in ecommerce. Many established online merchants are now turning to drop shipping asamethod for minimizing stock on hand, decreasing overall shipping costs and reducing delivery times to customers.
Quicker Success Through Business Kits And Startup Guides
You have always had an interest in startingaparticular type of business. သို့သော်, realistically you know that you lack the expertise required. How can you startup the desired business from scratch and begin making profits without the steep learning curve? Your answer might be to buyabusiness kit or startup guide. ဥပမာ, let`s say you wanted to start your own import and export business. You will find business kits and startup guides written by persons who have alr...
The problem with some business ideas is their cost. To manufacture and marketaproduct you have invented could cost you millions of dollars. The investment in machinery, အဆောက်အဦးများ, inventory and other expenditures could bankrupt you before your first sale ever occurred. For this reason, many prefer to runapaper business. Paper businesses do not require large investments of capital for expensive equipment, စာရင်း, နှင့်အဆောက်အဦး. Many paper businesses can be run from y...
ငါတို့မြို့ ‘ အရင်းအမြစ်ရှာထုတ်ကုန်များဒေသအလိုက်နှင့်
သင်တို့အဘို့တစ် trinket အစဉ်အဆက်တက်ခူးတော့ အကယ်. လူထုအရင်းအမြစ်များနှင့်အတူကို Creative Get $4 တစ်ခြံရောင်းချခြင်းမှာထိုသို့ရောင်းချခဲ့ $65 ebay မှာ, သငျသညျငွေသားသို့သင်တို့၏ဘဏ္ဍာ Hunt ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုသိ. ဒါပေမယ့်ခြံအရောင်း၎င်း၏ Goodies သင့်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောဒေသခံအရင်းအမြစ်မဟုတ်. http ၏ Dennis Hester://MillionDollarDeals.com နီးပါးသီးသန့်ဒေသခံပံ့ပိုးပေးသုံးပြီးအောင်မြင်သောအွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်. ခွေးလှေးစျေးကွက်, ရှေးဟောင်းစတိုးဆိုင်များ, လေလံရောင်းချမှု, ယာဉ်စျေးဆိုင်များ, Hester သူတို့အားလုံးကိုတက်ရောက်. တစ်ခုမှာရှယ်ယာ ...
ထိပ်တန်း7Ways To Profit From Foreign Trade
Here are seven excellent ways to earn income from international trade. 1. Importing: Retail store owners can find additional products to sell from foreign manufacturers, ဖြန့်ဖြူး, and other suppliers. You may even decide to go exclusively into the import business and becomeawholesale distributor. 2. Exporting: Manufacturers can find new customers for their products in foreign countries. You could also become an Export Management Agent. Arrange for other domestic c...
Here are some excellent businesses that you can start, operate and grow from your home. All these work at home businesses have the following desirable features: **Low Startup Costs **Ease of Entry **High Income Potential **Home Based and Operated **Worldwide Sales Potential **Residual, Recurring and/or Passive Income Potential 1. Consulting A consultant is someone expert inafield who, forafee, advises businesses or individuals on various matters of concer...
ပျေါထှနျးခဲ့လက္ကား Dropshippers ရိုက်စား
Using Drop Shippers for Your Online Store? Avoid These Common Drop Shipping Scams. I lostaton of money with fake suppliers until I found these guys. It's time to learn the truth about wholesale and drop shipping from someone who KNOWS the business!
Drop Shipping ၏တနျဖိုး: သင်ကဘယ်လိုအများကြီးသိမ်းဆည်းခြင်းခံရ?
Learn the difference between drop shipping versus the standard method.
ငွေအွန်လိုင်း Make ရန်အနိမျ့ကုန်ကျစရိတ်နည်းလမ်းများ
လူအတော်များများဟာသူတို့တစ်တွေငွေရှာစက်သို့မိမိတို့၏ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်နိုင်သည်ကိုသဘောပေါက်ပါပြီ. သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်အတူငွေရှာနိုင်ပါတယ်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်. ဤဆောင်းပါးသည်ကိုသင်အသားတင်ပေါ်မှာငွေရှာဖို့အကြိမ်ကြိမ်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းလမ်းတွေပြပါလိမ့်မယ်.
Drop Shipping အွန်လိုင်းငွေရှာဖို့အတိုငျး Way ကို Is?
Drop shipping, isasystem whereby you promote the products ofaparticular manufacturer, take orders directly, and the manufacturer/source handles all the inventory and fulfillment functions for you. You will make money, save money, and fatten your bottom line utilizing drop shipping. ဒီနေရာမှာဘယ်လိုဖွင့် ...
Web ကိုအပေါ်တစ်ဦးအောင်မြင်သောမူလစာမျက်နှာအခြေပြုစီးပွားရေး Running
Many people these days are looking into starting their own ecommerce business, or looking into expanding their existing business onto the web. Once they get this idea they go online and research for hours on how to runasuccessful business online and most of them come up with junk like, ?I made $20,000 in my first month, now I am on vacation and still making money off my website?. These places also state you can be really lazy and do minimal work while becoming filthy rich. Well these websites are wrong and must be avoided at all costs.
Drop Shipping ၏တနျဖိုး
Most retailers agree drop shipping isahuge time saver. But is itamoney saver as well? It is often said that time is money. But just what is the true value of drop shipping?
အဆိုပါ Get Rich လျင်မြန်စွာစိတ်ကျန်းမာရေး
အဘယ်သူမျှမပိုရောင်းအား Scripts?5တဖန်ကိုယ် Be ရန်နည်းလမ်းများ
4 “ရောင်းမည်သူခိုး” သငျသညျအဆိုပါ Lookout အကြောင်းမူကားတွင် Be ရန်လိုအပ်
ဂယ်ရီ Blum E-သင်ယူ: ထိရောက်သောထမ်းလေ့ကျင့်ရေး
ဒေတာကို Entry မူလစာမျက်နှာလုပ်ငန်းခွင်
ရှေ့နေချုပ်-လိုင်းကိုက်ညီမှုရှိသည့်န်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့်ဥပဒေလမ်းတံတားများအတွက်စျေးကွက် – အပိုင်းငါ
သင်အမှန်တကယ် Make နိုင်သလား $1000.00 ဒေတာများကို Entry 'Programs ကိုအတူတစ်နေ့?
RSS Feeds – The Basics For Everyday People
Eddie Munson ဒါရိုက်တာ၏စေ့စေ့စပ်စပ်ပွိုင့်မယ့်ဘုတ်အဖွဲ့မှခနျ့အပျခံ
5 ထိပ်တန်းအရာကလေး Boomers တစ်ဦးကနေအိမ်စီးပွားရေးစတင်ခြင်းမပြုမီလုပ်ပါရှိရမည်
ကော်ပိုရိတ်အထောက်အထား defining, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အထောက်အထား & ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ်
How to Get Your Customer Talking
8 ပြည်သူ့အဆိုပါစည်းကမ်းများ Love ရန် Get ရန်ရွှေ Techniques
Canvas Printing Its Methods and Application
အဆိုပါအစည်းအဝေးအစီအစဉျရဲ့အွန်လိုင်းအားသာချက်:7ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိစ္စများ Down Cut ရန်နည်းလမ်းများ
Follow @GVMG_BwebsiteWS @GVMG_BwebsiteWS အားဖြင့် Tweet ဖြစ်ပါတယ်:GVMG - ကမ္တာ့ Virus ကိုစျေးကွက်အုပ်စု
ကြော်ငြာ Post (3)
Adobe က (20)
AdSense အ (183)
သင့်ရဲ့ Advertise (94)
Advertising ကြော်ငြာ (1,186)
Advertising ကြော်ငြာကြော်ငြာ (1)
Advertising ကြော်ငြာအေဂျင်စီ (26)
Advertising ကြော်ငြာကုမ္ပဏီများ (9)
Advertising ကြော်ငြာကုန်ကျစရိတ် (24)
Advertising ကြော်ငြာခိုင်မြဲသော (6)
Advertising ကြော်ငြာကွန်ယက် (9)
Advertising ကြော်ငြာထုတ်ကုန်များ (4)
Advertising ကြော်ငြာနှုန်း (7)
Advertising ကြော်ငြာအခွန်ဝန်ကြီးဌာန (10)
Advertising ကြော်ငြာမဟာဗျူဟာ (11)
Advertising ကြော်ငြာက်ဘ် (2)
Advertising ကြော်ငြာအလုပ်လုပ် (5)
AdWords အ (93)
Affiliate Marketing ကို (117)
Affiliate Program ကို (203)
API ကို (708)
website ရဲ့ backlink (27)
banner ကြော်ငြာ (49)
banner Advertising ကြော်ငြာ (21)
အခြေခံ. စီးပွားရေး (537)
အကောင်းဆုံး Advertising ကြော်ငြာ (8)
ဘာသာ2မျိုးပါသော (6)
Bing မှ (270)
တစ်အွန်လိုင်း Build (9)
စီးပွားရေး Build (7)
စီးပွားရေး Advertising ကြော်ငြာ (8)
စီးပွားရေး Applications ကို (7)
တစ်ဦးကစီးပွားရေး Create (22)
တစ်ဦးကကုမ္ပဏီ Create (3)
ကို Creative (445)
ကို Creative စျေးကွက် (2)
Marketing ကို define (1)
ဒစ်ဂျစ်တယ် Advertising ကြော်ငြာ (3)
သဘောင်္တင်ခ drop (28)
ကို eBay (160)
အီးမေးလ် Programs ကို (4)
အီးမေးလ်က Software များ (2)
Facebook က (6)
Flickr ကို (3)
com အာရုံစူးစိုက် (1)
အခမဲ့ Advertising ကြော်ငြာ (54)
com စုရုံး (1)
စီးပွားရေး get (16)
Go ကို Daddy (1)
hosting စီးပွားရေး (2)
hybrid ကို (25)
Start ရန်စိတ်ကူးများ (2)
Inc မှ. (111)
interactive Advertising ကြော်ငြာ (6)
interactive စျေးကွက် (1)
အင်တာနက်ကို Advertising ကြော်ငြာ (43)
Larry က (10)
LinkedIn တို့ (3)
ဒေသခံ Advertising ကြော်ငြာ (5)
အစာရှောင်ခြင်း Make (6)
အွန်လိုင်း Make (9)
E ကိုစီမံခန့်ခွဲ (14)
Market ကသတင်းများ (2)
Market ကသင့်ရဲ့ (129)
Marketing ကိုအကြံဉာဏ် (2)
Marketing ကိုထိုအ Advertising ကြော်ငြာ (55)
Marketing ကိုကုမ္ပဏီ (50)
Marketing ကိုသင်တန်းအမှတ်စဥ် (11)
Marketing ကိုအခိုငျအမာ (21)
Marketing ကိုအကြံပြုချက်များ (22)
Marketing ကိုနည်းလမ် (7)
Marketing ကို Professional က (18)
marketing ကို Seo (1)
Marketing ကိုဆိုက် (15)
Marketing ကိုဖြေရှင်းနည်း (11)
Marketing ကို Techniques (57)
Marketing ကိုသိကောင်းစရာများ (22)
စျေးကွက် Tool ကို (169)
mass အီးမေးလ် (4)
မီဒီယာ Advertising ကြော်ငြာ (4)
Microsoft က (137)
မော်ဒယ် E ကို (3)
မူလစာမျက်နှာ မှစ. ပိုက်ဆံ (61)
MSN ကို (52)
multi အဆင့်စျေးကွက် (15)
Net ကစျေးကွက် (280)
Network မှစီးပွားရေး (1)
Network ကိုစျေးကွက် (146)
NGO အဖွဲ့ (240)
အွန်လိုင်း Advertising ကြော်ငြာ (46)
ကိုနှိပ်ပြီး Per ပေးဆောင် (72)
PayPal က (73)
pixel Advertising ကြော်ငြာ (10)
Ppc ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် (1)
Reseller ခငြ့်အရေး (13)
တစ်အွန်လိုင်း Run (4)
အီးမေးလ်ပို။ ပါ (9)
SEO ဆိုသည်မှာ (123)
Server ကို (146)
Service ကိုစီးပွားရေး (28)
Skype ကို (11)
တစ်ဦးကကုမ္ပဏီ Start (7)
တစ်ဦးကနေအိမ် Start (96)
တစ်ဦးက Web Start (7)
တစ်ဦးကျဘျဆိုကျ Start (6)
တစ်အွန်လိုင်း Start (29)
လျာထားသော Advertising ကြော်ငြာ (10)
စီးပွားရေးများအတွက် Templates ကို (2)
အဆိုပါ Sphere (4)
Toolkit ကို (15)
ထိပ်တန်း Advertising ကြော်ငြာ (3)
Advertising ကြော်ငြာအမျိုးအစားများ (11)
Start ရန် Want (86)
web ကိုကြော်ငြာ (2)
web ကို Advertising ကြော်ငြာ (6)
web ကိုစီးပွားရေး (33)
web ကိုစျေးကွက် (25)
web site ကို (596)
web ကိုဖြေရှင်းနည်း (3)
ဝက်ဘ်ဆိုက် Advertising ကြော်ငြာ (1)
website ကိုစျေးကွက် (9)
သာ. ပညာ (15)
မူလစာမျက်နှာ မှစ. လုပ်ငန်းခွင် (274)
က World Wide (92)
Yahoo က (169)
Youtube ကို (11)
စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
GVMG - ထုတ်ဝေနိုင်ငံစာရင်း : World Wide Web ကိုပတ်ပတ်လည်သင်တို့နှင့်အတူအဆောင်းပါးမျှဝေကြပါစို့
အာဖဂန်နစ္စတန် | အာဖရိကတိုက် | အယ်လ်ဘေးနီးယား | အယ်လ်ဂျီးရီးယား | အင်ဒိုရာ | အင်ဂိုလာနိုင်ငံ | ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ | အာရပ် | အာဂျင်တီးနား | အာမေးနီးယား | သြစတြေးလျ | သြစတြီးယား | အဇာဘိုင်ဂျန် | ဘဟားမား | ဘာရိန်း | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ | ဘာဘေးဒိုးစ | ဘယ်လာရုစ် | ဘယ်လ်ဂျီယမ် | ဘေလီဇ် | ဘီနင် | ဘူတန် | ဘိုလီးဗီးယား | ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား | ဘော့ဆွာနာ | ဘရာဇီး | ဘူလ်ဂေးရီးယား | Burkina Faso | ဘူရွန်ဒီ | ကမ္ဘောဒီးယား | ကင်မရွန်း | ကနေဒါ | ကိပ်ဗာဒီ | ချဒ် | ချီလီ | တရုတ်နိုင်ငံ | ကိုလံဘီယာ | ကော်မ္မရိုဇ့် | ကွန်ဂို | ကော်စတာရီကာ | ခရိုအေးရှား | ကျူးဘား | ဆိုက်ပရပ်စ် | ခကျြခကျြ | ချက်သမ္မတနိုင်ငံ | Darussalam | ဒိန်းမတ် | ဂျီဘူတီနိုင်ငံ | ဒိုမီနီကန် | ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ | အရှေ့တီမော | အီကွေဒေါနိုင်ငံ | အဲဂုတ္တုပြည်၌ | အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | အီရီထရီးယား | အက်စ်တိုးနီးယား | အီသီယိုးပီး | ဖီဂျီ | ဖင်လန် | ပြင်သစ် | ဂါဘွန် | ဂမ်ဘီယာ | ဂျော်ဂျီယာ | ဂျာမနီ | ဂါနာ | ဗြိတိသျှ | ဗြိတိသျှ(ဗြိတိန်နိုင်ငံ) | ဂရိနိုင်ငံ | နေးဒါ | ဂွာတီမာလာ | ဂီနီနိုင်ငံ | ဂီနီဘစ် | ဂိုင်ယာနာ | ဟေတီ | ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ဟောင်ကောင် | ဟန်ဂေရီ | အိုက်စလန် | အိန္ဒိယ | အင်ဒိုနီးရှား | အီရန် | အီရတ် | အိုင်ယာလန် | ဣသရလေ | အီတလီ | အိုင်ဗရီကို့စ် | ဂျမေကာ | ဂျပန် | ယော်ဒန်မြစ် | ကာဇက်စတန် | ကင်ညာ | ကီရီဘာတီ | ကိုဆိုဗို | ကူဝိတ် | ကာဂျစ္စတန် | လာအိုနိုင်ငံ | လတ်ဗီးယား | လေဗနုန်တော | လီဆိုသို | လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ | လစ်ဗျားနိုင်ငံ | လီချင်စတိန်း | လစ်သူ | လူဇင်ဘတ် | မကာအို | မက်ဆီဒိုးနီးယား | ဒါဂတ်စကာ | မာလာဝီ | မလေးရှား | မော်လ်ဒိုက် | မာလီ | မော်လ်တာ | မာရှယ် | မာတီနစ် | Mauritania | မောရစ်ရှ | မက္ကစီကို | Micronesia | မော်လ်ဒိုဗာ | မိုနာကို | မွန်ဂိုလီးယား | မွန်တီနီဂရိုး | မော်ရိုကို | မိုဇမ်ဘစ် | မြန်မာ | နမီးဘီးယား | Nauru ကျွန်း | နီပေါ | နယ်သာလန် | Neves သြဂတ်စဗစ် | နယူးဇီလန် | နီကာရာဂွာ | နိုင်ဂျာ | နိုင်ဂျီးရီးယား | မြောက်ကိုရီးယား | မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန် | မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်(ဗြိတိန်နိုင်ငံ) | နော်ဝေ | အိုမန် | ပါကစ္စတန် | ပလောင်း | ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေကို | ပနားမား | ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ | ပါရာဂွေး | ပီရူး | ဖိလစ်ပိုင် | ပိုလန် | ပေါ်တူဂီ | Puerto Rico | ကာတာနိုင်ငံ | ပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်း | ရိုမေးနီးယား | ရုရှားနိုင်ငံ | ရဝမ်ဒါ | စိန့်လူစီယာ | ဆာမိုအာ | ဆန်မာရီနို | စဝ်တုန်နှင့်ပရ | ဆော်ဒီအာရေဗျ | ဆီနီဂေါ | ဆားဘီးယား | seychelles | ဆီယာရာလီယွန် | စင်္ကာပူ | ဆလိုဗက်ကီး | ဆလိုဗေးနီး | ရှောလမုန်သည် | ဆိုမာလီယာ | တောင်အာဖရိက | တောင်ကိုရီးယား | စပိန် | သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ | ဆူဒန် | ဆူရာနမ် | ဆွာဇီလန် | ဆွီဒင် | ဆွစ်ဇလန် | ဆီးရီးယားအာရပ် | ထိုင်ဝမ် | Tajikistan | တန်ဇန်းနီးယား | ထိုင်း | သွားရန် | အဘိဓါန် Tonga | ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို | တူနီးရှား | ကြက်ဆင် | တာ့ခ်မင်နစ္စတန် | Tuvalu | ယူအက်​​စ်အေ | ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ | ဗြိတိန်နိုင်ငံ | ယူကရိန်း | အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု | ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း | ယူနိုက်တက်စတိတ် | ယူနိုက်တက်စတိတ်(ယူအက်​​စ်အေ) | ဥရုဂွေး | ဥဇဘက် | ဗာနူအာ | ဗာတီကန် | ဗင်နီဇွဲလား | ဗင်နီဇွဲလား Bolivar | ဗီယက်နမ် | ဗင်းဆင့် | ယီမင် | ဇမ်ဘီယာ | ဇင်ဘာဘွေ | GDI | ကမ္တာ့ဒိုမိန်းနိုင်ငံတကာ, Inc မှ. | GDI Signup ဘာသာစကားများလက်စွဲစာအုပ် - GDI အကောင့် Setup ကိုဘာသာစကားများလမ်းညွှန် | Freedom.WS | WEBSITE.WS | .WS ဒိုမိန်း | .WS ဒိုမိန်း Affiliate | dot-WS ပူဖောင်း | dot-com ပူဖောင်း | dot-WS စန်း | dot-com စန်း | ဘဝအဘို့အဝင်ငွေခွန် | GDI Earth ဝက်ဘ်ဆိုက် | ကမ္တာ့ Earth ဝက်ဘ်ဆိုက် | ကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ websites |
မှပံ့ပိုးသည် စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု